Aliexpress मा 32२,, 34, ties 36 ब्रा सम्बन्धको आकार के हो? | सबैका लागि उपयोगी जानकारी।
Aliexpress मा 32, 34, 36 को ब्रा आकारहरू के हो?
यो इकाई अमेरिकाबाट आएको हो। यी तथ्या्कहरु केटीको छातीमुनि शरीरको परिधि को आकार संकेत गर्दछ। इन्च मा मापन। एक इन्च २.2.54 सेन्टीमिटर हुन्छ। यी नम्बरहरू सजिलैसँग अनुवाद गर्न सकिन्छ र साइज रोज्नुहोस् जुन तपाईंलाई उपयुक्त छ।
ब्रा को आकार 32२,, 34, ties 36 Aliexpress मा छातीमुनि परिधि डिजाइन गर्नका लागि अमेरिकी मानक हो। आकारमा अस्थिरता - प्लस वा माइनस दुई सेन्टीमिटर।
To 68 देखि cm२ सेमी - साइज 72२ को छेउमा।
परिधि to 73 देखि c 77 सेन्टिमिटर - आकार 34 XNUMX।
Irth 78 देखि cm२ सेमी - परिमाण 82 36।
सामान्यतया, अधिक स्वीकार्य ब्रा आकारहरू पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, र 32२,, 34, and 36 र A, B, C, D अमेरिकामा प्रयोग गरिन्छ। जहाँसम्म मैले बुझें एलीएक्सप्रेसको वेबसाइटमा ब्राको साइज 32२,, 34, ties ties लाई जोड्छ मतलब स्तन मात्रा, र एक इन्चको इकाई मापन गर्नुहोस्।
एलीएक्सप्रेस वेबसाइटमा ब्राको आकारहरू डिसेफर गर्ने धेरै सरल छ, किनकि यी आकारहरू अमेरिकी ढाँचामा संकेत गरिएका छन्।
A, B, C, D - यी अक्षरहरूले कपको आकार (१, दोस्रो, तेस्रो, th) संकेत गर्दछ।
,२,, 32, 34 छातीको खण्ड हो।
यसलाई स्पष्ट पार्न यहाँ यो प्लेट प्रयोग गर्नुहोस्, जुन सबै आकार रूसी ढाँचामा अनुवाद गरिएको छ।
यी संख्याहरू - ,२,, 32, 34 ले ईन्चमा छातीमुनि शरीरको परिधिको आकारलाई संकेत गर्दछ। संख्या ० सेमीको छातीमुनि भोल्युमसँग मिल्दछ। अर्को, inches 36 इन्च - cm cm सेमी र - 32 - the० मापन प्रणालीमा हामीलाई बढी परिचित छ।
यो धेरै छाती मुनिको घेरा हो। I अक्षरको अर्थ आरआर कप हो, र नम्बर छातीको परिधि हो।
एलिप्रेसप्रेस अनलाइन स्टोरको वेबसाइटले अमेरिकी आकारहरू प्रयोग गर्दछ। जुन बच्चाहरूको चीजहरूमा र वयस्कहरूमा दुबै लागू हुन्छ। ब्रा 32२,, 34, mean 36 को आकार भनेको छातीमुनि परिधिको व्यास हो। र ब्राको आकार छनौट गर्दा तपाईंले अन्य प्यारामिटरहरू विचार गर्नु आवश्यक छ। तपाईं यहाँ अझ विस्तृत रूपमा पढ्न सक्नुहुन्छ यो साइट। र उत्पाद समीक्षा पढ्न नबिर्सनुहोस् किनबेच गरिएको सामानको आकार र गुण फरक हुन सक्छ।
ब्रा टाईहरूको आकार रूसीमा अनुवाद गरिएको छ, छातीमुनि भोल्युम। यो तपाईंको छाती मुनि भोल्यूममा कति सेन्टीमिटर हुन्छ। आकार 32२ - यो रूसीमा cm० सेमी हो। आकार 70 रूसीमा 34 सेमी छ। र रूसीमा 75 36 आकार cm० सेमी छ।
32२,, 34, 36 को मतलब छातीमुनि obkhat हुन्छ। तपाईं वेबसाइटमा यी सबैको बारेमा अधिक पढ्न सक्नुहुन्छ: http://fashiony.ru/page.php?id_n=92912। यसले सबै अक्षरहरू र अन्य संख्यात्मक मानहरूको बारेमा पनि बताउँछ कि तिनीहरू सामान्यतया अमेरिकी अनलाइन ब्रा स्टोरहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
आकार .32,34,36२..XNUMX ईन्चमा छातीमुनि भोल्युम हो। चित्रले सही मापन कसरी गर्ने भनेर देखाउँदछ।
सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ कि सेन्टीमिटर फ्ल्याट छ, तर कडा छैन। तपाईं सहज हुनुपर्छ। हात तल झर्नु पर्छ। खैर, धेरै मापन टेपहरूमा त्यहाँ दुबै इन्च र सेन्टीमिटर हुन्छन्। यदि तपाईंले inches१ इन्च पाउनुभयो भने, तपाईंको आकार or० वा ,२, आदि हुनेछ।
करिब १. months महिना अघि मैले ties 1,5 मा टाँस्ने साइजको बेतरको ब्रालाई अर्डर गरें, जुन रूसी 36० को अनुरूप हो, मैले हिजो यसलाई प्राप्त गरें, थोरै प्रेस गरें, अब मलाई थाहा छ कि मलाई अलि बढी अर्डर गर्नु पर्छ। उत्तरका लागि सबैलाई धन्यवाद। यो सहि छ, यी आकारहरू इन्चमा छन्।
62 सेकेन्डमा उत्पन्न डाटाबेसमा 0,237 प्रश्नहरू।